Fitsipika momba ny fiainana manokana ao amin'ny tranokala | Martech Zone
Zoma, Jona 8, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Marty Thompson
Izaho sy i Marty dia tao amin'ny Klub media sosialy any Chicago notazonin'ireo olona tsara at Edelman. Ny lohahevitra dia ny mangarahara amin'ny haino aman-jery sosialy ary ireo mpikirakira dia Tom Chernaik, CEO an'ny Cmp.ly, Michael Kiefer, GM ao amin'ny BrandProtect, Rich Sharp, SVP an'ny vondrona ara-pahasalamana nomerika Edelman sy Roula Amire, Managing Editor of Ragan.com. Nifantoka tamin'ny fandrahonana sy loza mety hitranga amin'ny media sosialy sy ny fomba mety handaminan'ny orinasa, hiarovana ary hamaliana ireo olana ny fifanakalozan-kevitra. Fifanakalozan-kevitra lehibe ary resahin'ireo marika lehibe kokoa ankehitriny… Manantena aho fa manomboka mahatsikaritra ihany koa ireo orinasa kely sy salantsalany!
Ireo mpanao dokambarotra dia mamorona fitaovana fanaraha-maso mpanjifa an-tserasera be pitsiny kokoa, masoivoho federaly ary vondrona misy tombontsoa ho an'ny mpanjifa no manery ny fenitra manokana momba ny fiainana manokana. Aza manara-penitra, mahazo vahana ny hetsika fizahana tranonkala farany farany any Etazonia, miaraka amin'ny fitaovam-pitaterana sy ny orinasa manery azy ireo hanome teknolojia opt-opt tsotra hitanana ny mombamomba ny tsirairay manokana. Efa misy ohatra ao Eoropa: ny ePrivacy Directive eropeana dia lalàna iray mitaky ny habaka ahazoana alalana avy amin'ireo mpitsidika hanaraka azy ireo. Jereo ny olana eo akaiky eo, ary koa ny mety ho fidiram-bolam-panjakana manimba ny vokany hafa.
Navoaka avy amin'i Hazavao. Ny Provighten Privacy dia vahaolana manokana sy fanarahan-dalàna izay miantoka ny fanangonana angon-drakitra ho an'ny mpanjifa ny tranokalanao dia mifanaraka tanteraka amin'ny politikanao momba ny tsiambaratelo ary koa ny lalàna amerikana sy iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ireo tagan'ny tranokalanao rehetra. Ny ensighten Privacy dia mamela ny tranokala hanaraka tanteraka ny lohatenin'ny lozisialy Do Not Track (DNT) sy ny fepetra takiana amin'ny UK Cookie Law, ary ahafahanao manolotra ny fividianana angona angon-drakitry ny mpanjifa na ny fampiasa opt-in ao amin'ny tranonkalanao.
Tags: fanarahan-dalànahanazavany fiainana manokanamangarahara